Turkiga oo Kenya iyo Soomaaliya dhex-dhexaadinaya | KEYDMEDIA ONLINE
Dalka Turkiga ayaa ka shaqeynaya sidii Soomaaliya iyo Kenya la isugu keeni lahaa miiska wada hadalka si ay uga wada xaajoodaan arrinta ku saabsan dacwada badda ee ka socata Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda.
ANKARA, Turki - Sida ay Keydmedia Online ogaatay Wasiirka Arimaha Dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Çavusoglu ayaa booqan doona Kenya iyo Soomaaliya horraanta bisha soo socota, halkaas oo la filayo inuu kula kulmo Madaxweynayaasha Labada dal ee kala ah Farmaajo iyo Uhurro Kenyatta.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aad u daneynayaa in labada dal ay xal nabadeed ka gaaraan dacwada badda oo ahayd isha ugu weyn ee khilaafaadka labada dhinac u dhexeeya sanadihii la soo dhaafay.
Xukuumadda Ankara waxay u aragtaa inay ka faa'iideysan karto xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya maadaama uu ganacsi kala dhexeyso labada dal.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa diiday dalbkii Kenya ee ahaa in markii afaraad dib loo dhigo dhageysiga kiiska, waxaana tagista Maxamakadda loo madlan yahay 15-ka bisha Maarso.
Wasiirka Arimaha Dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Çavusoglu, wuxuu sidoo kale isku dayi doonaa inuu xalliyo xaaladda aan fadhin ee ka dhex taagan labada waddan.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Recep Tayyib Erdogan ayaa labada dalba ku leh galaan-gal xooggan, waxa ayna gacan ka siisaa hormarinta dhaqaalaha iyo dhismaha ciidamada.